SEENAA EEBBISAA ADDUNYAA Oromia Shall be Free |
bilisummaa September 4, 2015	Comments Off on SEENAA EEBBISAA ADDUNYAA
Eebbisaa Addunyaa weellisaa beekkamaa fi qabsaawa mirga Oromoo ti. Kan inni ittiin beekkamu keessaa tokko walleesaa kan gootummaa faarsuu fi deeggarsa olaanaa ABOf, dhaabbata Oromoon hiree isaa ofiin akka murteeffatuuf qabsaawu, qabuuni. Eebbisaan Humna Poolisii Federaalatiin gaafa Hagayya 30, 1996tti manaasaa isa Finfinnee jiru keessatti ajjeefame.
Ebbisaan kan dhalate naannoo Oromiyaa Wallagga Lixaa magaalaa Dambi Doolloo keessatti. Eebbisaan maatiisaaf ilma angafa yoo ta’u obboleeyyan dhiiraa 2 fi durbaa 3 qaba. Eebbisaan nama kennaa qabuu fi dargaggeessa kabajamaa ture. Barumsaa sadarkaa 1ffaa Mana Barumsaa Oliiqaa Dingilitti kan barate yoo ta’u, barumsa sadarkaa 2ffaa ammooMana Barumsaa Sadarkaa 2ffaa Qeellamitti barate. Eebbisaan qormaata biyyoolessaa fudhatee waan darbeef yuunivarsiitii galee barachuuf qophaa’aa ture.
Akka nama dhuunfaatti, Eebbisaan nama gara laafessa ture; ummata Oromoo garaa guutudhaan jaalata ture, baayyee dimmaafis ture. Eebbisaan namoota gargaaruu fi dhimmuufiif nama duubatti hin jenne ture; obboloota isaa, firootasaa, ollaasaa, namoota gargaarsa barbaadan kamiyyuu ni gargaara ture. Eebbisaan artisitii baayyee jaalatamaa, dinqisiifamaa, fi saboonaa dha. Eebbisaan jalqabaa qabee gootummaadhaan beekkama. Erga ABOn biyyaa ba’ee geggeessitoonni isaa biyyaa baqataanii ABO dhoksaadhaan socho’uu jalqabee boodalle, Eebbisa sirba isaatin hammenya mootummaan Itoophiyaa ummatarraan ga’u ibsuu hin dhiifne. Eebbisaan baayyee ija jabeessa, kan hin sodaanne fi ifatti hojii shororkeessummaa mootummaan Itoophiyaa ummata Oromoorraan ga’u balaaleffachuurraa duubatti jedhee hin beeku. Deeggarsa WBOtif qabus amma dhumaatti ittuma fufe.
Akka gabaasa Oromia Support Group Press Release No 14 kan Onkoloolessa 1996tti: weellisaa sabboonaa Oromoo Eebbisaa Adduynaa fi hiriyaansaa Xanna Wayyeessa ergamtuu humna nageenyaa mootummaa Itoophiyaatin gaafa Hagayya 30, 1996tti ajjaeefame. Yeroo namoonni meeshaa waraanaa hidhatan manasaa cabsanii seenan Eebbisaan manasaa kan naannoo Shiroomeedaa lakk 094, Olaanaa 13, Ganda 01 jiru keessa jira ture. Mannisaa kan argamu Imbaasii Ameerikaa kan Finfinneetti argamu irraa gara Kaabaatti ture.
Qabsawaan Nii Kufaa!
Qabsoon Ittii Fufaa!
Previous Food Crisis at the Horn of Africa
Next Update on Obbo Baqqalaa’s North America Tour